Iinkqubo neeNkonzo- BullyingCanada
/ Iinkqubo neeNkonzo
Lifeline: Uthungelwano lweNkxaso yeSizwe
BullyingCanada udale i-365-day-a-year, i-24 iiyure ngosuku, i-7 yeentsuku-ngeveki yenkxaso yenethiwekhi enikezela ngoncedo lolutsha oluguqula ubomi ngefowuni, ingxoxo ye-intanethi, i-imeyile kunye nokuthumela imiyalezo.
Le nkonzo yenkxaso ayinakuthelekiswa nanto eCanada - ihamba kude ngaphaya kweengcebiso eziqhelekileyo ezingaziwa ezinikezelwa ngamanye amancedo.
Ngeqela eliquka amakhulu amavolontiya asuka kulo lonke elaseCanada asebenza ngokuzimisela kumakhaya awo, BullyingCanada ibonelela ngenkxaso kunye nongenelelo ukuthintela kunye nokuyeka intlonti. Amavolontiya ethu aqeqeshelwe ukucebisa, ukuthintela ukuzibulala, ukulamla kunye nokusombulula iingxaki. La maqhawe chonga iingxaki kwaye zisombulule-ukuphelisa ubundlavini kunye nokuthintela ukwenzeka kwayo kwakhona.
Oku bakwenza ngokuba neencoko ezinzulu, zobuqu nolutsha olungcungcuthekiswayo kunye neentsapho zalo; abaxhaphazi nabazali babo; ootitshala, abacebisi beengcebiso, iinqununu, nabasebenzi bebhodi yesikolo; iinkonzo zentlalo yoluntu; kwaye, xa kuyimfuneko, amapolisa asekuhlaleni. Injongo yethu ekugqibeleni kukuphelisa umonzakalo oxhatshaziweyo oye wafunyanwa ngabantwana, kwaye bafumane ukhathalelo olusoloko luyimfuneko olufunekayo ukuze baphilise.
Ngokuqhelekileyo, BullyingCanada ngokuqhubekayo uhlala ebandakanyeka kwiiveki ezimbini ukuya kwezintathu, kodwa iimeko ezinzima ngakumbi ziye zafuna inkxaso kwiinyanga okanye unyaka okanye ngaphezulu ukusombulula. Asinikezeli de abantwana abaxhatshazwayo bakhuseleke kwaye banokugqithisela kwikamva eliqaqambileyo.
Ukudala iingqondo ezivulekileyo kunye nokukhusela abantwana
Ukongeza ekuboneleleni izikolo kunye nombutho wabahlali ngeepowusta ezichasene nokuxhatshazwa, iincwadana, kunye nezinye izinto zokufunda, BullyingCanada, phantsi kolawulo lukaRob Benn-Frenette, ONB, ikwabonelela ngocweyo kumaqela abo bonke ubukhulu.
Ezi ndibano zocweyo zixhobisa ulutsha kunye neenkokheli zabahlali ukuba zilwe ngokusebenzayo ukuxhaphaza kwaye zibonelele ngeendlela ezintsha zokulungisa imiba abajongana nayo kubo bonke ubomi babo.
INkqubo yeSizwe yeZifundo
Ukuxhobisa iiNkokeli zoLutsha
INkqubo yeSizwe yeeScholarship yaphehlelelwa ngo-2013 ukunika imbuyekezo kulutsha, nabanokuba ngabaxhamli abatyunjwe ngabasebenzi besikolo. BullyingCanada uyayiqonda imfuneko yokuhlakulela iinkokeli zoluntu ezinomdla, kwaye uphuhlise inkqubo yesizwe yokufunda ukuze anike izibonelelo zemfundo yasemva kwesekondari.
Ezi nkxaso-mali zixhobisa ulutsha oluthi lube ziinkokeli zasekuhlaleni ezijongana nokuxhatshazwa ezikolweni.
Akukho Mntwana ushiyeke ngasemva
Ukususela kwi2006, BullyingCanada ibeyeyesizwe Yiya e umbutho xa kufikwa kwiinzame zokuchasa ukuxhatshazwa. Ewe, sihlala sikuphela kombutho wesizwe wesisa osebenza nolutsha lwaseKhanada, iintsapho zabo, kunye noluntu lwabo, ukubonelela ngenkxaso yexesha elide, izixhobo kunye nolwazi oluyimfuneko ukunqanda ubundlobongela obuxhatshazwayo kunye nokugcina abantwana bethu bekhuselekile.
Siyazingca ngokubonelela abantwana abaxhatshazwayo ababuthathaka ngenkxaso abayidingayo, sandise iinkqubo zethu zokuthintela ubundlobongela nokuqinisekisa ukhuseleko lwabantwana bethu.
BullyingCanada usebenza ngokungadinwa ukuthethelela egameni lolutsha olungamaxhoba okungcungcuthekiswa kwilizwe liphela—esakha ikamva eliqaqambileyo nelilungileyo lolutsha oluxhatshazwayo kunye noluntu lwalo.
Abantwana abaninzi bayiqonda kakuhle into yokuba kuyintoni ukungcungcuthekiswa kuba bakubona yonke imihla! Ukuxhatshazwa kwenzeka xa umntu ebuhlungu okanye esoyikisa omnye umntu ngabom kwaye lowo uxhatshazwayo kunzima nokuzikhusela. Ngoko ke, wonke umntu kufuneka athathe inxaxheba ukunceda ukunqanda.
Ukuxhatshazwa akulunganga! Yinto yokuziphatha eyenza umntu oxhatshazwayo azive esoyika okanye engonwabanga. Zininzi iindlela abantu abatsha abaxhaphazana ngazo, nokuba abaqondi ukuba ngelo xesha.
Ezinye zezi zibandakanya:
Ukubetha, ukutyhala kunye nezinye izenzo ezenzakalisa abantu ngokwasemzimbeni
Ukusasaza amarhe amabi ngabantu
Ukugcina abantu abathile ngaphandle kweqela
Ukuhlekisa abantu ngendlela ekhohlakeleyo
Ukufumana abantu abathile ukuba "bagange" kwabanye
Zeziphi iintlobo eziqhelekileyo zokuxhatshazwa?
Ukuxhatshazwa ngamazwi – ukuthukana, ukuphoxa, ukuqhula, ukusasaza amarhe, ukoyikisa, ukuthetha kakubi ngenkcubeko yomntu, ubuhlanga, ubuhlanga, inkolo, isini, okanye utyekelo lwezesondo, izimvo ezingafunwayo zezesondo.
Ukuxhatshazwa entlalweni - ukugebenga, ukuhlambalaza, ukukhuphela ngaphandle abanye kwiqela, ukuhlazisa abanye ngezijekulo zasesidlangalaleni okanye imidwebo ejoliswe ukubeka abanye phantsi.
Ukungcungcuthekiswa ngokwaseMzimbeni - ukubetha, ukuxhokonxa, ukumpintshana, ukuleqa, ukutyhala, ukunyanzela, ukutshabalalisa okanye ukuba izinto eziphathekayo, ukubanjwa ngokwesondo okungafunwayo.
I-Cyber ​​Bullying - ukusebenzisa i-intanethi okanye imiyalezo ebhaliweyo ukoyikisa, ukubeka phantsi, ukusasaza amarhe okanye ukwenza intlekisa ngomnye umntu.
Yiyiphi eminye yemiphumo emibi yokungcungcuthekiswa?
Ukuxhatshazwa kuyabacaphukisa abantu. Inokwenza abantwana bazive bengamalolo, bengonwabanga kwaye besoyika. Inokubenza bazive bengakhuselekanga kwaye bacinge ukuba kukho into engalunganga ngabo. Abantwana banokuphelelwa yintembelo yaye basenokungaphindi bafune ukuya esikolweni. Isenokubagulisa.
Abanye abantu bacinga ukuba ukungcungcuthekiswa yinxalenye nje yokukhula kunye nendlela yokuba abantu abaselula bafunde ukubambelela kwiziqu zabo. Kodwa ukuxhatshazwa kunokuba nemiphumo ehlala ixesha elide emzimbeni nasengqondweni. Ezinye zezi ziquka:
Ukurhoxiswa kwimisebenzi yentsapho kunye nesikolo, ufuna ukushiywa yedwa.
Ukuba ukuntlonta akuyekwa, kuyabenzakalisa nabo babukeleyo, kwanomntu oxhaphaza abanye. Ababukeli boyika ukuba banokuba lixhoba elilandelayo. Kwanokuba bavakalelwa kakubi ngalo mntu uxhatshazwayo, bayakuphepha ukubandakanyeka ukuze bazikhusele okanye ngenxa yokuba bengaqinisekanga ukuba mabenze ntoni.
Abantwana abafunda ukuba banako ukujamelana nogonyamelo nogonyamelo baqhubeka besenjenjalo naxa sele bebadala. Banethuba eliphezulu lokubandakanyeka kubundlobongela bokuthandana, ukuxhatshazwa ngokwesondo, kunye nokuziphatha kolwaphulo-mthetho kamva ebomini.
Ukuxhatshazwa kunokuba nefuthe ekufundeni
Ukuxinezeleka kunye nokuxhalaba okubangelwa ukuxhatshazwa kunye nokuxhatshazwa kunokukwenza kube nzima ukuba abantwana bafunde. Inokubangela ubunzima ekunikeleni ingqalelo kwaye inciphise isakhono sabo sokunikela ingqalelo, nto leyo echaphazela ukukwazi kwabo ukukhumbula izinto abazifundileyo.
Ukuxhatshazwa kunokukhokelela kwiinkxalabo ezinzulu
Ukuxhatshazwa kubuhlungu kwaye kuyahlazisa, kwaye abantwana abaxhatshazwayo baziva behlazekile, bebethwa kwaye behlazekile. Ukuba iintlungu azipheli, ukungcungcuthekiswa kunokukhokelela ekucingeni ukuzibulala okanye ukuziphatha ngobundlobongela.
Kuxhaphake kangakanani ukuxhatshazwa?
EKhanada, umfundi om-1 kwaba-3 okwishumi elivisayo uye wanikela ingxelo yokuba uyangcungcuthekiswa. Phantse isiqingatha sabazali baseKhanada baye banikela ingxelo yokuba banomntwana olixhoba lokungcungcuthekiswa. Uphononongo lufumanise ukuba uxhatshazo lwenzeka kanye ngemizuzu esixhenxe kwibala lokudlala kwaye kanye ngemizuzu engama-25 kwigumbi lokufundela.
Kwiimeko ezininzi, ukuxhatshazwa kuyeka kwimizuzwana eyi-10 xa oontanga bengenelela, okanye bengayixhasi indlela yokuziphatha.
Ndingenza ntoni ngoku malunga nobundlavini kwindawo endihlala kuyo?
Okokuqala, khumbula ukuba silapha ngenxa yakho 24/7/365. Thetha nathi bukhoma, usithumelele i email, okanye usinike umsesane kwi-1-877-352-4497.
Oko kuthethiweyo, nanga amanyathelo ambalwa abambekayo onokuwathatha:
Xelela umntu omthembileyo – utitshala, umqeqeshi, umcebisi, umzali
Thetha into encomekayo kumxhaphazi ukuze umphazamise
Hlalani ningamaqela ukuze niphephe ukungqubana
Sebenzisa uburharha ukulahla okanye ukunxibelelana nomxhaphazi wakho
Yenza ngathi loo mntu ukungcungcuthekisayo akakuchaphazeli
Hlala uzikhumbuza ukuba ungumntu olungileyo kwaye ufanelwe yimbeko
Endaweni yokungahoyi isiganeko sokuxhatshazwa, zama:
Xelela utitshala, umqeqeshi okanye umcebisi
Yiya ngakulo okanye ecaleni kwexhoba
Sebenzisa ilizwi lakho-yithi "yeka"
Yiba ngumhlobo wexhoba
Khokela ixhoba kude nemeko
Thetha notitshala okanye umcebisi
Cinga ngendlela obuya kuvakalelwa ngayo xa umntu ekuxhaphaza
Qwalasela iimvakalelo zexhoba lakho – cinga phambi kokuba wenze
Zeziphi iinkcukacha-manani ezibalulekileyo ekufuneka uzazi malunga nokuxhatshazwa?
IKhanada inomlinganiselo we-9 ophezulu wokuxhatshazwa kudidi lwabaneminyaka eli-13 ubudala kumlinganiselo wamazwe angama-35. 
Ubuncinane umfundi om-1 kwaba-3 okwishumi elivisayo eKhanada uye wanikela ingxelo yokuba kutshanje uye wangcungcuthekiswa. 
Kubantu abadala baseKhanada, i-38% yamadoda kunye ne-30% yabasetyhini baye baxhatshazwa ngamaxesha athile okanye rhoqo ngexesha leminyaka yabo yesikolo. 
I-47% yabazali baseCanada baxela ukuba banomntwana wexhoba lokungcungcuthekiswa. 
Nakuphi na ukuthatha inxaxheba ekuxhatshazweni kwandisa umngcipheko weengcamango zokuzibulala kulutsha. 
Izinga localucalulo olufunyenwe phakathi kwabafundi abachonga njengeLesbian, Gay, Bisexual, Trans-chonged, Two-Spirited, Queer or Questioning (LGBTQ) iphezulu ngokuphindwe kathathu kunolutsha olungatshatanga. 
Amantombazana adla ngokuxhatshazwa kwi-Intanethi kunamakhwenkwe. 
I-7% yabasebenzisi be-Intanethi abadala eCanada, abaneminyaka eyi-18 nangaphezulu, bazixela ukuba balixhoba lokungcungcuthekiswa kwi-Intanethi ngaxa lithile ebomini babo. 
Eyona ndlela ixhaphakileyo yokuxhatshazwa kwi-cyberbullying ibandakanya ukufumana izoyikiso okanye ii-imeyile ezindlongondlongo okanye imiyalezo ekhawulezileyo, echazwe yi-73% yamaxhoba. 
I-40% yabasebenzi baseKhanada bafumana ukuxhatshazwa rhoqo ngeveki. 
IBhunga laseKhanada ekuFundeni-Ukuxhatshazwa eCanada: Indlela ukoyikiswa kukuchaphazela ngayo ukufunda
Molcho M., Craig W., Due P., Pickett W., Harel-fisch Y., Overpeck, M., kunye neQela lokuBhala lokuBullying le-HBSC. Iindlela zexesha elinqamlezayo kwi-bullying behavior 1994-2006: iziphumo ezivela eYurophu naseMntla Melika. Ijenali yeHlabathi yeMpilo yoLuntu. 2009, 54 (S2): 225-234
UKim YS, kunye ne-leventhal B. Bullying kunye nokuzibulala. Uphononongo. Ijenali yaMazwe ngaMazwe yoBuchule boNyango kunye neMpilo. 2008, 20 (2): 133-154
I-Bully Free Alberta-Ukuxhatshazwa kwabantu abathandana nabantu abathandanayo
IStatistics Canada-Ukuxhatshazwa kwi-Cyber ​​kunye nokurhwebesha abantwana kunye nolutsha
IStatistics Canada-Uzixelile ngokwakho ukuxhatshazwa kwi-Intanethi eCanada
U-Lee RT, kunye noBrotheridge CM "Xa ixhoba lijika lixhoba: Ukuxhatshazwa emsebenzini njengento ebonisa ukuchasana / ukuxhaphaza, ukujamelana, kunye nokuphila kakuhle". Ijenali yaseYurophu yoMsebenzi kunye neNgqondo yoMbutho. 2006, 00 (0): 1-26
Zeziphi ezinye iintsomi eziqhelekileyo malunga nokuxhatshazwa?
Intsomi #1 - "Abantwana kufuneka bafunde ukuzimela."
Inyani – Abantwana abafumana isibindi sokukhalaza ngokuxhatshazwa bathi bazamile kwaye abakwazi ukumelana nale meko bebodwa. Thatha izikhalazo zabo njengobizo loncedo. Ukongeza ekunikeni inkxaso, kunokuba luncedo ukunika abantwana uqeqesho lokucombulula iingxaki kunye noqeqesho lokuqiniseka ukubanceda ekujonganeni neemeko ezinzima.
Intsomi yesi#2 - "Abantwana kufuneka babuyisele umva-kakhulu ngakumbi."
Inyani - Oku kunokubangela ingozi enkulu. Abantu abangcungcuthekisayo badla ngokuba makhulu yaye banamandla kunamaxhoba abo. Oku kukwanika abantwana umbono wokuba ubundlobongela yindlela esemthethweni yokusombulula iingxaki. Abantwana bafunda indlela yokuxhaphaza ngokubukela abantu abadala besebenzisa amandla abo ukuze babe nogonyamelo. Abantu abadala banethuba lokumisela umzekelo omhle ngokufundisa abantwana indlela yokucombulula iingxaki ngokusebenzisa amandla abo ngendlela efanelekileyo.
Intsomi #3 - "Yakha umlinganiswa."
Okwenyani - Abantwana abaxhatshazwa ngokuphindaphindiweyo, banokungazithembi kwaye ababathembi abanye. Ukungcungcuthekiswa kuyonakalisa indlela umntu azicingela ngayo.
Intsomi yesi#4 – “Iintonga namatye anokwaphula amathambo akho kodwa amazwi akanakuze akwenzakalisa.”
Inyani-Izikrweqe ezishiywe kukubizwa ngamagama zingahlala ubomi bonke.
Intsomi yesi#5 – “Asikontlonti leyo. Bayaqhula nje.”
Inyani - Ukugculela okukhohlakeleyo kubuhlungu kwaye kufuneka kuyekwe.
Intsomi #6 - "Bekusoloko kukho abaxhatshazwayo kwaye kuya kuhlala kukho."
Inyani – Ngokusebenzisana njengabazali, ootitshala nabafundi sinamandla okutshintsha izinto nokudala ikamva elingcono labantwana bethu. Njengengcali ekhokelayo, uShelley Hymel, uthi, "Kuthatha isizwe sonke ukutshintsha inkcubeko". Masisebenze kunye ukutshintsha isimo sengqondo malunga nokuxhatshazwa. Ngapha koko, ubundlavini asingombandela wokuziphatha – lithuba lokufundisa.
Intsomi #7 - "Abantwana baya kuba ngabantwana."
Inyani - Ukuxhatshazwa yindlela yokuziphatha efundiweyo. Abantwana basenokuba baxelisa ihambo endlongondlongo abayibone kumabonwakude, kwimifanekiso eshukumayo okanye ekhaya. Uphando lubonisa ukuba i-93% yemidlalo yevidiyo ivuza ukuziphatha okunobundlobongela. Iziphumo ezongezelelweyo zibonisa ukuba i-25% yamakhwenkwe aneminyaka eyi-12 ukuya kwe-17 atyelela rhoqo iisayithi ze-intanethi eziyingozi kwaye ezithiye, kodwa iiklasi zokufunda nokubhala kwimidiya zanciphisa ukujonga kwamakhwenkwe ubundlobongela, kunye nezenzo zabo zobundlobongela kwibala lokudlala. Kubalulekile ukuba abantu abadala baxoxe ngobundlobongela kumajelo eendaba kunye nolutsha, ukuze bafunde indlela yokugcina kwimeko. Kukho imfuneko yokunikela ingqalelo ekuguquleni izimo zengqondo ngogonyamelo.
umthombo: Urhulumente wase-Alberta
Ukuba unomdla wokuvolontiya nge BullyingCanada, unokufunda ngakumbi kwinqaku lethu Yibayinxalenye kwaye Yiba livolontiya maphepha.
Sisoloko sifuna abantu abanomdla, abanomdla, nabazinikeleyo ukuba basincede siyeke ulutsha olusesichengeni ukuba lungcungcuthekiswe.